Andro fanangonana Bin - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Ampidiro ny antsipirian'ny fanananao mba hahazoana ny antsipirian'ny andro fanangonana bin. Azonao atao koa ny misintona kalandrie fanangonana ho an'ny taona.
Raha tsy izany, azonao atao ny mifandray amin'ny Cleanaway Customer Service Center amin'ny 1300 1COAST (1300 126 278) mba hahazoana kalandrie fanangonana halefa na halefa aminao.
Ampidiro ny adiresin'ny fananana hanombohana fikarohana ary fidio ny adiresin'ny fananana avy amin'ny lisitra midina hanombohana famandrihana.
Tsy nisy valiny hita